Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Aeroflot waxay u baahan tahay in duuliyeyaasha la tallaalo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Lix duuliye oo ka tirsan Aeroflot ayaa diiday COVID-19 jabs, oo laga joojiyay mushaar la’aan
Lix duuliye oo u shaqeeya shirkadda diyaaradaha ee caalamiga ah ee ugu weyn Ruushka ayaa la joojiyay oo laga joojiyay waajibaadkooda iyadoo la raacayo xeerarka u oggolaanaya shirkadaha inay si wax ku ool ah u eryaan shaqaalaha diida inay saxiixaan tallaal ka dhan ah fayraska COVID-19.
Aeroflot waxay ka joojisay duuliyayaashii diidmada jaadka COVID-19.
Duuliyayaashii la hakiyay ayaa diiday inay saxiixaan tallaalka ka hortagga coronavirus.
Ururka duuliyeyaasha ayaa u cawday agaasimaha guud ee shirkadda Aeroflot, iyagoo ku tilmaamay hakinta midabtakoor.
Shirkadda diyaaradaha ee Aeroflot ee Ruushka, oo inta badan ay leedahay dawladda Ruushka, ayaa u dirtay ugu yaraan lix duuliye oo aan tallaalin fasax aan mushahar lahayn ama fasax mushahar la'aan ah, ayuu yidhi af-hayeenka diyaaradda.
Afhayeen u hadlay Aeroflot ayaa sheegay in lix duuliye la saaray fasax xanuun, mushaar la'aan, sababtoo ah waxay doorteen inaysan helin jab. Si kastaba ha ahaatee, tirada duuliyeyaashii shaqada laga joojiyay waxay ahaayeen kuwo aad u yar marka loo eego baaxadda guud ee shaqaalaha shirkadda Aeroflot, iyadoo 2,300 duuliye ay ku jireen bakhaaradii shirkadda.
Ururka shaqaalaha duuliyeyaasha ayaa ka cawday agaasimaha guud ee shirkadda Aeroflot Mikhail Poluboyarinov takoorid, iyagoo ku dooday in kalkaaliyaasha aan la tallaalin iyo shaqaalaha taageerada farsamada aysan la kulmin shaqo ka ceyrin la mid ah.
Igor Delduzhov, madaxweynaha Sheremetyevo Ururka Shaqaalaha Shaqaalaha Duulimaadka, oo fadhigiisu yahay garoonka diyaaradaha ee Aeroflot ee Moscow, ayaa ku gacan seyray go'aanka shaqada looga eryay shaqaalaha diyaaradda. Sida laga soo xigtay isaga, jawaabta qallafsan ee kuwa dooranaya in aan la tallaalin waa wax aan macquul ahayn, marka la eego ku dhawaad ​​84% shaqaalaha ayaa la sheegay in durba la tallaalay.
“Ma jiro shirkad diyaaradeed oo kale oo Ruush ah oo haysa ganaaxyo la mid ah,” ayuu Deldyuzhov ku sheegay warqad uu ku qoray mareegaha ururka shaqaalaha.